Thwebula WinRAR 5.40 – Windows – Vessoft
WinRAR – isofthiwe enamandla cindezela idatha futhi sisebenze ezinqolobaneni. Isofthiwe isekela umsebenzi nge ezinqolobaneni ezinkulu izakhiwo kanye inikeza ezingeni eliphezulu zlib. WinRAR uyakwazi alulame ezinqolobaneni ezilimele, ukudala self-bekha kanye ezinqolobaneni multivolume, umsebenzi nge ebulungelweni iphasiwedi evikelwe noma ngekhodi, njll Isofthiwe kuwuthinta okusebenza wamazwe eyenza ukuba ukupakisha noma ukhiphe yokugcina ngaphandle kwethulwa software. WinRAR uyakwazi ukuhlukanisa ezinqolobaneni zingene imiqulu ngabanye serekhodi phephile abathwali idatha.
Izinga eliphezulu zlib
Usekela archive ezinkulu ngetakhiwo
Kwakha archives multivolume
Ukuxoxa umhloli wamazwe
Ukuvikelwa Iphasiwedi ye ezinqolobaneni
Amazwana on WinRAR:
WinRAR Ahlobene software:
Amafayela zlib Isofthiwe cindezela bese decompress yokugcina nezinhlobo ezahlukene. Isofthiwe isekela ukuguqulwa phakathi archive izakhiwo kanye kwenza ukuba alulame ezinqolobaneni ezilimele.
Amafayela zlib Isofthiwe licindezele amafayela bese isebenzisa izindlela yokucinana ezikhiqiza kakhulu ukuba kuzuzwe imiphumela engcono kakhulu.
English, Afrikaans, Українська, Français... PowerArchiver 2015 15.04.03
Amafayela zlib The archiver enamandla ngokusekelwa ethandwayo archive takhiwo. Isofthiwe kwenza ukuba alulame ezinqolobaneni ulimele ukuguqula kwamanye amafomethi.
Amafayela zlib Ithuluzi obusebenzayo yakhelwe ukusebenza nge ezinqolobaneni. Isofthiwe isekela takhiwo popular futhi ikuvumela ukuba ukwengeza watermark ukuvikeleka kwe-copyright.
English, Français, Español, Deutsch... WinMount 3.5.1018 futhi 3.4.1020
Amafayela zlib Isofthiwe ukwakha disk virtual kusukela izithombe ezahlukene amafayela. Isici esiyinhloko isofthiwe iyona wekhasi of ezinqolobaneni esihlinzeka emsebenzini amafayela ngaphandle isidingo ukususwa kwabo.
PeaZip 6 Standard futhi Portable
Amafayela zlib Isofthiwe cindezela, ukuguqula futhi ukhiphe yokugcina nezinhlobo ezahlukene kanye osayizi. Isofthiwe ine isethi amathuluzi for ukusebenza ngempumelelo kwe-archives.
Akwazi ukugcina Umbuso indawo ukwakha izithombe disk ngokusekelwa amafomethi ezahlukene. Isofthiwe kwenza ukuba ashise idatha kwi-disk futhi yokuwuthola ukuvikelwa ikhophi.
Chat Ewebhu Ukukhulumisana Voice Ithuluzi for umbhalo, izwi kanye video imiyalezo. Isofthiwe ikuvumela ukuba wabelane amafayela bese wengeza abasebenzisi oxhumana nabo kusuka kwezinye izinhlelo zokusebenza.
-Internet Isofthiwe eziningi services web eyakhelwe-in for ukufinyelela kalula amakhasi akho athandwayo e-Web kanye nezingosi zokuxhumana nabantu ngokusebenzisa isiphequluli.
English, Français, Español, Deutsch... Tux Paint 0.9.22
Graphics and design Umhleli graphic for izingane zasenkulisa ubudala neqoqo elikhulu imiphumela kanye namathuluzi. Isofthiwe esihambisana isenzo ngasinye by funny nemisindo.
English, Afrikaans, Українська, Français... HWMonitor 1.30